Adeegsiga Warbaahinta Isdhexgalka Si Aad U Dhiirrigeliso Xayeysiintaada B2C | Martech Zone
Khamiis, Juun 16, 2016 Khamiis, Juun 16, 2016 Muxamed Yaasiin
Si kasta oo ay tahay warshadaha aad ku jirto, haddii ganacsigaagu ku jiro qaybta B2C, fursadaha aad ayey u fiican yihiin inaad la kulanto tartan xoog leh - gaar ahaan haddii aad tahay dukaan leben & madaafiic ah. Ka dib oo dhan, waad ogtahay inta iyo inta jeer ee macaamiisha ay wax ku iibsadaan internetka maalmahan. Dadku wali waxay aadayaan dukaamada lebenka & hoobiyeyaasha; laakiin ku habboonaanta wax ka iibsashada khadka tooska ah ayaa ka dhigtay tirada macaamiisha dukaanka ku jirta inay hoos u dhacaan. Mid ka mid ah siyaabaha ganacsigu u yahay isku day inaad wax ka qabato tan waa adoo dalacsiinaya - Kuuboonada, agabka cusub, qiimo dhimista waaweyn, iwm. Mar labaad inkasta oo isla tartamayaashaas aan ka wada hadalnay ay wadaan dallacsiinno la mid ah kuwa soo jiidan kara…. hadaanay kaa sasaba badnayn taada.
Maalmahan, dallacaadaha ganacsiyada ay wadaan kuma filna in lagu wado taraafikada dukaanka ama xitaa iibsashada internetka. Tartamayaashu waxay u badan tahay inay wadaan qaar ka mid ah dallacaadyo isku mid ah oo adiga - mararka qaarkood isku mar. Taasi waxay tiri, macaamiil badan ayaa u isticmaali doona "sahlanaan" inay tahay go'aanka go'aan qaadashada haddii ay raacayaan iyo haddii kale inay la socdaan aasaaskaaga: lagu kalsoonaan karo oo ku saleysan dib-u-eegista khadka tooska ah, u dhowaanshaha gurigaaga (haddii lebiska & hoyga dukaanku), talo-siinta saaxiib ( si looga fogaado cilmi baaris) iyo khibrad (oo leh aasaasid) waa sababaha ugu badan ee go'aaminta. Marka la soo koobo, dallacaadahaagu waxay u baahan yihiin inay istaagaan.
Si dallacaadahaaga sumcadda ay u muuqdaan, waxaad si muuqata ugu baahan tahay inaad sameyso wax ka duwan. Mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee tan lagu sameeyn karo waa iyada oo la isku daro khibradaha is-dhexgalka websaydhkaaga sumadda. Khibradaha is-dhexgalka waa muhiim maxaa yeelay waxay u oggolaadaan magacyada fursad ay ku siiyaan hagitaan ku saabsan go'aanno muhiim ah, ama BIG iibsi. Waxay sidoo kale siisaa noocyo fursad ay ku madadaaliyaan macaamiishooda. Waa kuwan xulashooyinka qaarkood ee waayo-aragnimada is-dhexgalka ah ee aad ku dhexgeli karto websaydhkaaga si aad u kordhiso kaqeybgalka, iyo ugu dambeyntii, kor u qaadista beddelaadda.
Ganacsiyada iibiya waxsoosaarka "xad-dhaafka ah" iyo adeegyada inta badan u baahan fikir badan (baabuur, alaabta guryaha, amaahda guryaha, iwm.), Xisaabiyayaashu waa qayb weyn oo ka mid ah waxyaabaha is-dhexgalka ah oo macaamiishaada u horseedi kara go'aannada wax iibsashada saxda ah Marar badan, xitaa macaamiisha ugu aqoonta iyo xasiloonida badan waxay u baahan yihiin inay dib uqaadaan tallaabo si ay u go'aamiyaan waxay awoodaan iyo inaysan awoodin. Qaar ka mid ah xisaabiyeyaasha ugu caamsan ee aan aragno waa: Xisaabiyeyaasha lacag bixinta bil kasta, xisaabiyeyaasha dulsaarka iyo xisaabiyeyaasha lacag-bixinta.
Dabcan, maaliyaddu maahan sababta kaliya ee loogu baahan yahay kalkuleytar. Macaamiishaadu waxay u baahan karaan inay xisaabiyaan inta boos ee ay u heli karaan sariir cusub. Ama, macaamiishaadu waxay rabi karaan inay xisaabiyaan cufnaanta jirkooda, ama culeyskooda ku habboon, si loo go'aamiyo barnaamijka jimicsiga ee iyaga ku habboon. Dulucda halkan ayaa ah in xisaabiyayaashu ay go'aan ka gaaraan fududaynta, maxaa yeelay waxay siinayaan qiimayaasha tirooyinka doorsoomayaasha qaarkood. Markasta oo ay sii fiicnaato tirada (ha ahaato mid sareeya ama ka hooseeya), waqtiga ugu fiican ee macaamilku helayo jawaabtooda - taasina caadi ahaan waxay horseeddaa damacyo badan oo wax iibsasho ah.
Xisaabiyayaashu waxay cadeyn karaan inay si aad ah uga faa'iideystaan ​​macaamiisha doonaya inay kaqeyb galaan dallacaaddaada hadda ugu badan. In kasta oo xisaabiyeyaashu asal ahaan loo isticmaali karo wakhti kasta, awoodda loo helo jawaabaha su'aalaha muhiimka ah waxay hoos u riixaysaa qafiska wax iibsashada. Markasta oo ay wax ka ogaadaan xaaladdooda gaarka ah, ayay u sii janjeedhaan inay iibsadaan. Hadana haddii ay jirto dhiirrigelin socota (aan dhahno, "Lacag Bixin Maayo Ilaa 2017"), macaamilku wuxuu isku dayayaa inuu xisaabiyo waxa ay awoodi karaan mustaqbalka ka hor inta uusan samayn ballanqaad noocaas ah. Markay helaan jawaabtooda, kadib way iibsan doonaan.
Mararka qaarkood go'aan qaadashada macmiilku lama xiriiro dhaqaalaha (ama xisaab gaar ah); laakiin halkii, doorbid saafi ah. Marka macaamiisha loo soo bandhigo ikhtiyaarro badan oo waaweyn (oo si gaar ah ugu badan inta lagu jiro dallacsiinta), mararka qaarkood waxay ka hor istaagaan awoodda go'aan. Waxay u egtahay doqon, laakiin waa run run. Qaar ka mid ah macaamiisha ayaa si fudud u quusan doona haddii aysan ku imaan karin go'aanka wax iibsiga - gaar ahaan haddii ay yihiin iibsasho ballaaran. Haddii macaamilku aanu si buuxda wax u saarin, fikirkiisu waa “Hagaag, waa inuusan sidaa u weyneyn markaa. Maxaan ugu bixinayaa lacag xad dhaaf ah hadaan xayndaabka ku jiro? ka dibna way sii gudbaan.
Khibradaha qiimeynta ayaa ah qaab kale oo aad u wanaagsan oo macaamiishaada looga dhaadhiciyo hoos u iibsiga - gaar ahaan markay tahay dallacaadahaaga internetka. Sababtoo ah dallacsiintu sida caadiga ah waxay ka kooban yihiin xulasho gaar ah oo ah alaabooyin, adeegyo ama dalabyo, qiimeyntu waxay u jihayn kartaa macaamiisha mid ka mid ah xulashooyinka la heli karo.
Aynu u adeegsanno kooxo baabuur tusaale ahaan. Sidaad u badan tahay inaad ka warqabto, kooxaha gawaarida waxay ka kooban yihiin dhowr ganacsiyaal oo ku yaal gobol gaar ah; iyo goob kasta oo wax iibisa waxay caadi ahaan iibisaa hal nooc oo gawaari ah (Toyota, Kia, Hyundai, iwm). Aynu nidhaahno macaamilku wax wanaagsan ayuu ka maqlay kooxdan baabuurta; iyo dhammaan ganacsiyada iibinta (kooxda gawaarida) waxay ka qayb qaadanayaan "Lacag Bixin Maayo Ilaa 2017". Dhammaantood waxay u egyihiin si fiican oo wanaagsan… ilaa aad ka ogaato in macaamilku uusan gebi ahaanba hubin waxa samaynta / nooca gaariga ay raacayaan. Si macaamilkaas looga ilaaliyo inuu u aado ganacsi kale, kooxda baabuurta ayaa qiimeyn ku sameyn kara boggooda si ay ugu jiheystaan ​​dhanka go'aanka wax iibsiga. Nooca qiimeynta ugu habboon wuxuu noqon karaa mid bixiya “samee / tusaale” macmiilka oo ku saleysan jawaabaha uu macmiilku bixinayo - “baabuur noocee ah inaad kaxeyso?” qiimaynta.
Mid ka mid ah habka ugu wanaagsan ee looga faa'iideysan karo khibradaha is-dhexgalka ee dallacaadahaaga ayaa ah inaad KA QAADATO khibradaada is-dhexgal ee aad ku darto dallacsiinta. Iyadoo aan loo eegin waxa iibka kale ee aad socotid, waxaad ku dhiirrigelin kartaa macaamiisha inay ku soo booqdaan dukaankaaga (ama websaydhka) iyagoo wata ciyaar deg deg ah - oo aad ku siinayso fursad aad ku guuleysato abaalmarin weyn, iyo inaad siiso hadiyado ama abaalmarinno abaalmarinno dadka aan guuleysto Ghanna ah. Khibradahaani waxay ka koobnaan karaan: mashiinnada mishiinka dhijitaalka ah, giraangiraha wareega-si-guuleysiga (sida Wheel of Fortune) ama khibrado kale oo la kala sooco oo soo xula hal guuleyste weyn. Abaalmarinta kale ama abaalmarinnada (oo la xusi karo ka-qaybgalka ka hor) waxay noqon karaan wax qiimo leh sida la-talin bilaash ah, oo aan bil walba la bixin, lacag hoos loo dhigo, ama $ 100 laga iibsado $ 800 ama ka badan. Qaybta ugu fiican ayaa ah in khibradaha noocan oo kale ah ay si aad ah u mashquulsan yihiin, maxaa yeelay waxay sare u qaadaan xamaasadda oo marar dhif ah ayey u horseedaa macaamiil xanaaqsan ama wareersan. Xaqiiqada ah inay ku baashaalayaan oo ay "ku guuleysanayaan" wax ayaa tan ka dhigaya nooc weyn oo khibrad is-dhexgal ah - waxay kuxirantahay warshadaha, dabcan.
Nooca ugu dambeeya ee waayo-aragnimo is-dhexgal ah ee aan mari doono waa "su'aalo." In kasta oo su'aalahu aysan sida caadiga ah bixin wax qiimo la taaban karo ah (qiime la taaban karo, waxaan ula jeedaa jawaab, dalab ama abaalmarin), waxay uga tagi karaan macaamiisha dareen isku qanacsan. Guud ahaan, markay macaamiishu dareemaan farxad ama ay ku faanaan naftooda, waxay u sheegi doonaan asxaabtooda. Xaaladda su'aalaha (qaab khibrad is-dhexgal ah), macaamiisha ayaa u janjeera inay la wadaagaan natiijooyinkooda warbaahinta bulshada - iyo xitaa iyaga la tartamaan. Mar labaad, in kasta oo aysan jirin wax la taaban karo oo la taaban karo, haddana khibradaha noocan ahi waa kuwo ku fiican calaamadeynta. Markasta oo kedis badan la ogaado macaamiisha xiisaha ay u leedahay, ayaa si aad ah loogu yaqaanaa sumaddaasi - iyo xiisaha ay u qabaan waxay noqdaan astaantaas. Iyo illaa inta dallacsiintu socoto, su'aalaha aad ku weydiiso su'aalahaas ka tarjumi karaa mawduuca dhiirrigelinta khadka tooska ah - taas oo sii murjinaysa xiisaha macaamiisha.
Midkee baa ka mid ah noocyadan khibradeed ee faa'iidada ugu badan u leh ganacsigaaga? Noo sheeg faallooyinka hoose!
Tags: khibradaha xayeysiintaisdhexgalka macaamiishaContent Suuqwaxyaabaha la wadaagayowarbaahinta is-dhexgalkadallacsiinta internetka